सलमान कि शाहरुख, बलिउडमा कुन खानको वर्चश्व? | Suvadin !
सलमान कि शाहरुख, बलिउडमा कुन खानको वर्चश्व?
यी दुर्इ सुपरस्टारबी फ्यान फलोइङ, फिल्म र सोसल मिडियामा यी दुई सुपरस्टारमा को अगाडि छन्, लगायतका विषयमा शुभदिनले एक रिपोर्ट तयार पारेको छ।
Apr 16, 2018 16:45
काठमाडाैं, बैशाख ३ – शाहरुख खान र सलमान खानबीच कहिले सम्बन्ध सुध्रिएको त कहिले बिग्रिएको खबरहरु आइरहेका हुन्छन्। यसै क्रमलाइ निरन्तरता दिँदै अहिले यी दुईको मित्रता उदाहरण दिन योग्य छ। यस्तैमा एक प्रश्न वर्षैदेखि सबैको दिमागमा आइरहेको छ, यी दुईमा नम्बर वान को हो ?
सलमानः बक्सअफिसमा अगाडि फिल्मको कुरा गर्ने हो भने बक्सअफिसमा सलमान खानकै वर्चश्व छ। हरेक वर्ष उनको एक ब्लकबस्टर फिल्म आएकै हुन्छ। २०१० मा आएको ‘दबंग’ मा चुलबुल पाण्डेको भूमिका निर्वाह गरेर उनले यो साबित गरेका थिए कि उनी बक्सअफिसका ‘किंग’ हुन्।
२०११ मा आएको ‘रेडी’ र ‘बडिगार्ड’ पनि दर्शकलाई औधी मन पर्‍यो। २०१२ मा आएको फिल्म ‘एक था टाइगर’ उनका लागि माइलस्टोन साबित भयो। यस फिल्मले जर्बजस्त कलेक्सन गरेको थियो। सोही वर्ष ‘दबंग २’ पनि आयो।
यो पनि सुपरहिट फिल्मको लिस्टमा सामेल भयो । वर्ष २०१३ उनका लागि खासै राम्रो रहेन तर २०१४ मा आएको फिल्म ‘किक’ ले बक्सअफिसमा धूम मच्चायो। फेरि २०१५ मा ‘बजरंगी भाईजान’, २०१६ मा ‘सुल्तान’ र २०१७ मा ‘टाइगर जिदा हे’ ले उनलाई सुपरस्टारको क्याटेगरीमा उभ्यायो।
उनका फिल्मले भारतमा मात्र नभएर विश्वभर दमदार कलेक्सन गर्ने गरेका छन्। २०१३ पछि शाहरुख चम्किएनन् शाहरुखले २०१३ पछि कुनै सुपरहिट फिल्म दिएका छैनन्। २०१३ मा आएको ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ लाई दर्शकले निकै रुचाए, तर यसपछि आएका ‘ह्याप्पी न्यू ईयर’, ‘दिलवाले’, ‘फ्यान’, ‘रईस’ र ‘जब ह्यारी मेट सेजल’ दर्शकको विश्वासमाथी उत्रन सकेनन्।
बक्सअफिसको नजिता हेर्ने हो भने शाहरुखभन्दा सलमान धेरै अगाडि निस्किसकेका छन्। अहिले सलमानलाई बक्सअफिसको ‘सुल्तान’ भन्ने गरिन्छ। सोसल मिडियामा पनि सलमान नै अगाडि सोसल मिडियामा फ्यान फलोइंगको कुरा गर्ने हो भने यहाँ पनि सलमान, शाहरुखभन्दा अगाडि निस्किएका छन्।
फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममध्ये दुई प्लेटफर्ममा सलमानको फ्यान फलोइंग शाहरुखको भन्दा धेरै छ। फेसबुकमा सलमानलाई ३ करोडभन्दा बढी व्यक्तिले फलो गर्ने गर्दछन्। शाहरुखको फ्यान फलोइंग २ करोडको आसपास छ।
यस्तै, सलमानलाई इन्स्टाग्राममा १.५५ करोडले फलो गरेका छन् भने शाहरुखलाई इन्स्टाग्राममा १.२३ करोडले फलो गर्ने गर्दछन्। तर, ट्विटरमा भने सलमानभन्दा शाहरुख अगाडि छन् । यहाँ शाहरुखको फ्यान फलोइंग ३.४८ करोड छ । यस्तै, सलमानलाई ट्विटरमा ३.२८ करोडले फलो गरेका छन्।